बिप्लवका कार्यकर्ताले लेखे रबिलाई गम्भीर पत्र: कर नतिर्ने एनसेल उडाउदा किन चित्त दुख्यो ? « Postpati – News For All
बिप्लवका कार्यकर्ताले लेखे रबिलाई गम्भीर पत्र: कर नतिर्ने एनसेल उडाउदा किन चित्त दुख्यो ?
बिपी बिद्रोही । रबि लामिछाने ज्यु नमस्कार !
तपाई देशको चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ । तपाईका लाखौ फ्यानहरु छन शुभ-चिन्तकहरु छन। म बैचारिक हिसाबले तपाई भन्दा अलि फरक बिचारधाराको मान्छे हुँ, तर एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले म पनि तपाईंको समर्थक हुँ।
तपाई जनतालाई सहि सुचना पुर्याउने एउटा माध्यम हो। जनतालाई सहि सूचना पुर्याउनेहरु सब भन्दा पहिले आफु स्पष्ट हुन आबस्यक छ, अनि भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । म मान्छु तपाईमा धेरै राम्रा गुणहरु पनि छन तर आफुले नबुझेको बिषयमा नबोल्दा अझै सुनमा सुगन्ध हुने थियो । यदि बोल्ने नै हो भने त्यसको गहिराइमा पुगेर अध्यन गरि सहि सुचना सम्प्रेषण गर्नु जिम्मेवार पत्रकारिता हुनेछ ।
हो… तपाईले धेरै बिषय बस्तुहरु सहि राख्नुहुन्छ तर गहिरिएर अध्यन नगरी लोकप्रियता कमाउन बोलेका बिषयहरुले तपाईका हजारौं सत्य कुराहरुलाइ पनि झुट बनाइदिन सक्छन। म जस्ता तपाईका फ्यानहरुलाई यहि डर छ ।
‘म’ तपाई जस्तै एक युवा हु। म जस्ता लाखौं युवाहरु छन यो देसमा । एउटा कुरा याद राख्नुस, तपाईका फ्यानहरु मात्र यो देशका मान्छे होइन । यो देशमा साच्चिकै परिबर्तन चाहाने मान्छेको ठूलो समूह पनि बाहिर छ ।
तपाई संग मेरो एक-दुई बिषयमा गम्भीर असहमति छ ।
तपाईको प्रशंसा गर्ने धेरै कुराहरु हुँदाहुँदै केहि आलोचना गर्ने ठाउँहरु पनि छन। तपाईंको लोकप्रिय कार्यक्रम सिधा कुरा जनता सगको केहि एपिसोडहरुमा बिप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बिषयमा राखेका आरोपहरु प्रति मेरा गम्भीर असहमतिहरु छन। म एक साधारण अपरिचित युवा हुँ, तपाईको परिचय निकै बिशाल छ तर तपाईं संग जुनसुकै एङ्गलबाट पनि बैचारिक बहस गर्न तयार छु।
सर्बप्रथम मेरो परिचय न ढाँटी भन्छु, ‘म बिप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आस्थावान सामान्य कार्यकर्ता हुँ ।’ पहिलो कुरा बिप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कुनै समूह होइन, यो राजनैतिक शक्ति हो ! यो कुरा तपाईले बुझ्न जरुरि छ । एउटा पत्रकार न्यायधीस बनेर राजनीतिक शक्तिलाई झुण्ड वा समूहको नाम दिन तपाइलाई छुट छैन । पत्रकारको परिधि भित्र रहेर कुनै पुर्बाह्ग्रह रहित सन्तुलित बिचार राख्नु मिडियाको जिम्मेवारी हो ।
तपाईले बुझ्न जरुरि छ, २०६९ सालमा तत्कालीन संविधानसभाबाट ९० जना सभासदहरु सहित कमरेड किरणको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी पुनर्गठन गरेर, संसदीय परिपाटीको बहिस्कार गरेर निस्किएको एउटा राजनैतिक शक्ति हो। जसरि आफुलाई परिवर्तित पत्रकारको रुपमा आफुलाई उभ्याई रहनु भएको छ, त्यसरी नै यो पार्टीले आफुलाई परिवर्तन शक्तिका रुपमा उभ्याएको छ ।
यसरि बिभिन्न राजनैतिक चरणहरु पारगर्दै अहिले नेपालको बैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको रुपमा उदियमान एउटा पार्टी हो । जुन पार्टीले गएको मङ्सिर ८ गरे राजधानीमा बिशाल सहभागिता द्वारा शक्ति देखाई सकेको छ । तर तपाई अझै समुह-झुण्ड भन्दै हुनुहुन्छ । देशैभरि बिप्लव नेतृत्वको संगठनमा लाम लागिरहेको कुरा तपाईको कलमको नजरले देखेन ।
अब भन्नुहोस, लाखौ करोडौं उत्पीडित जनसमुदायको साथ र समर्थन पाइरहेको एउटा राजनैतिक शक्तिलाई समुह भनेर अफबाह फैलाउने तपाई को हो ?
दोस्रो कुरा हामी यो देशमा तपाईकै पत्रकारिताको भाषामा दलाली व्यबस्थाको खारेज गर्न माग गर्दै थबाङ महाधिबेशनबाट बिद्रोहको कार्यदिशा पारित गरेर, यो मुकुकको परिवर्तनको निम्ति अनवरत संघर्षरत छौ । यो बिषयमा म पछि चर्चा गर्नेछु।
अर्को बिषय तपाई एउटा क्यामरा लिएर दुई चार जना पत्रकारहरु लिएर, दुई चार जना खराब नियतका मान्छेका पछि समाचार बनाउदै कुदनु हुन्छ । त्यो तपाईको मिसन होला, तपाईको लक्ष्य होला तर हाम्रो लक्ष्य अलि फरक र पृथक छ। हामीले यो देशको परिबर्तनको कुरा गर्दा बिद्रोहको कुरा गरेका छौ । एउटा कोठामा बसेर ब्यबसायिक डलरका लागि टिआरपी बढाउने हाम्रो कार्यक्रम होइन ।
अब भन्नुहोस, के हामी कुनै रहर नपुगेर वा भाग नपाएर बरालिदै हिडेका मान्छे हौ जस्तो लाग्छ ? यदि त्यस्तो हो भने त्यो भ्रमलाई तपाईको मानसपटलबाट अहिल्यै हटाइ हाल्नुस। तपाईले क्यामरा लिएर हिडे जस्तो सजिलो छैन रबि जि ! लाखौं उत्पीडित जनताका परिवर्तनका सपनाहरु बोकेर हिडन । हामी यो देशमा साचिकै परिवर्तन चाहान्छौ।
तपाई दुई चार जना दलाल मान्छेहरु सग जिस्किरहदा, हामी सिङो दलाल ब्यबस्था सग लडिरहेका छौ। तपाई देश परिवर्तनका लागि साच्चिकै सकारात्मक हुनुहुन्छ भने आउनुस सहकार्य गरौ ! तपाईले भनेका भ्रस्टचारी, कालोबजारी, दलाली, बिचौलियाहरुलाई मिलेर तह लगाउ । होइन भने परिवर्तनका पक्षधरका बिरुद्ध अफाबाह फैलाउन बन्द गर्नुस। खोक्रो आदर्श धेरै दिन टिक्दैन । समस्या उजागर गर्ने भन्दा समस्या निर्मुलिकरण गर्ने महान हुनेछ ।
अब म खाँटी कुरो तिर प्रवेश गर्छु…!
प्रिय रबि ज्यु ! तपाइ हामीले बोल्ने भाषा एउटै हो..! ‘दलाल, भ्रष्टचारी, बलात्कारी, बिचौलिया, सुत्खोरीलाइ चिनौ र तह लगाउ’ तर बुझाइ किन फरक भयो ? के हाम्रा भाषाहरु डलरमा बिक्रि भएका हुन ? अब भन्नुहोस, के तपाईले दुई-चार हजार करछली गर्नेहरुको समाचारको भिडियो बनाएर वाहिवाही कमाइरहदा एनसेलले त्रिचालीस अर्ब कर नतिरेको कुरा थाहा पाउनु भएन ? कहिल्यै उठाउनु भो त्यो बिषय ?
ल ठिक छ उठाउनु भयो रे..! के समाधान पायो त्यो बिषयले ? के तपाईको कुरा राज्यले सुनेको छ ? के तपाईलाई लाग्छ कि हामीले ललितपुरमा सिम बहादुर गुरुङको घरमा ताकेर बम हान्यौ ?
एनसेल माथिको जनकारबाहीमा सिम बहादुरको ज्यान जानू दुखद हो ! त्यो एउटा त्रुटि थियो, हामी पनि दुखी छौ । तर रबि ज्यु, एउटा कमजोरी पक्षलाई मात्र अगाडि सारेर पुरै प्रक्रिया गलत हो भन्ने तपाईंको आसय गलत हो।
एनसेललाई कारबाही कसले गर्ने त रबि ज्यु ? चुनावमा १०-१० अर्ब चन्दा दिएपछी सरकार र प्रतिपक्षी दुबै चुप छन् ! के तपाईको सिधा कुरा जनता संग कार्यक्रमले कारबाही गर्न सक्छ एनसेललाइ ? हैन भने मेरि आमाले दाउरा बोकेर किनेको सयको रिचार्ज कार्डबाट उठाएको कर राज्य लाई तिर्दैन भने एनसेलका टावर मात्र हैन हामी नेपालबाटै लखेट्छौ।
अर्को कुरा हाम्रो चन्दाको बिषयमा एनसेल सग कुनै बार्गेनिङ छैन । यो भ्रम पनि नपाल्नु होला। तपाई सत्यताको आबाज बुलन्द गर्ने एक पत्रकारले चन्दा उठाउन बम हानेको भन्नेकुरा प्रमाण ल्याएर आउनुहोस अनि बहस गरौला । हाम्रो बिरुद्ध जोडतोडले खनिनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
हामी बैज्ञानिक समाजबादी ब्यबस्था प्राप्तिको महा अभियानमा छौ। हामी तपाइले भनेजस्तो पद नपाएर बहुलाएका हैनौ। हाम्रो पनि मुल्य तोकिएको थियो सुखसयलको जिन्दगीको अफर सहित तर हामी हाम्रो भन्दा पनि सम्पुर्ण नेपालीको जिबनस्तर बदल्ने महान उद्देश्यमा लागेका छौ।
हामी माक्र्सवादमा बिस्वास गर्छौ। माक्सबाद समाज परिबर्तनको एक मात्र बैज्ञानिक आधार हो। माक्सबादले बल प्रयोग बिना शासन सत्ता र उत्पीडित मान्छेको जीवन स्तर फेरबदल गर्न असम्भव देख्छ। त्यसको रुप हतियार सहितको युद्ध पनि हुन सक्छ र हतियार उठने नउठने कुरामा सासकहरुको रबैयामा पनि भर पर्दछ।
अन्तमा, तपाईको क्यामरा सग दुई चार लाख मान्छेले फोकटको आश गरेका छन म मान्छु । तर हामीलाइ बिश्वका करोडौं उत्पीडित वर्गले आशा गरेका छन । जहाँ सम्म युद्दको कुरा छ, त्यो कसैले चाहेर हुने होइन, परिस्थितिले उब्जाउने हो ।
यी सबै लेखकका आफ्ना निजि बिचार हुन !
१६ फाल्गुन २०७५, बिहीबार को दिन प्रकाशित